Isigwebo sokusebenzela umphakathi siyabhekisiswa - Bayede News
NgoMbasa wezi-2021 iNkantolo kaMantshi eMahlabathini igwebe intombazane eneminyaka yobudala eli-16 izinyanga ezili-12 yenza umsebenzi womphakathi emveni kokulahlwa yicala lokushaya ngenhloso yokulimaza.
Le ntombazane efunda eMathole High School khona eMahlabathini ilahlwe icala lokushaya omunye umfundi ngoMandulo wezi-2020. Lesi sigameko saqoshwa kuvidiyo eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana. Lo mfundi uzobekwa ngaphansi kweso lozomqapha isikhathi esingangonyaka futhi uzothola ukwelulekwa ukuze akwazi ukulawula izinkinga zakhe okungenzeka ukuthi yizo eziholele ekutheni enze leli cala.
Lolu hlobo lwesigwebo sinikwa noma ngubani kuye ngokuthi inkantolo iboneni.
Hlobo luni lwalesi sigwebo esingakhishwa yinkantolo?
Kukubehluleli ukuthi bakhipha siphi isinqumo kodwa isigwebo kumele sihambisane necala elenziwe.
Lolu wuhlobo lwesijeziso esihlose ukuzuzisa umphakathi ohlukumezekile ngenxa yecala elenziwe. Abehluleli bajwayele ukuyalela abenze amacala ukuba benze imisebenzi yomphakathi okwengeziwe noma esikhundleni solunye uhlobo lwesijeziso njengokuboshwa, ukuhlawuliswa imali noma ukubekwa ngaphansi komqaphi.
Ngokwejwayelekile, abehluleli banamandla avulelekile ukunquma ngokwabo uhlobo lwesigwebo sokwenza umsebenzi womphakathi esinganikwa olahlwe yicala. Ziningi izindlela ezahlukene ezikhona inqobo uma zizozuzisa umphakathi futhi zingeke zihlukumeze. Kunemigomo embalwa abahluleli okufanele bayilandele uma bakha isigwebo sokwenza umsebenzi womphakathi.
Lesi sigwebo asingeni emacaleni abucayi
Isigwebo sokwenza umsebenzi womphakathi singakhishwa ngokuzimela noma njengomgomo wokuba ngaphansi komqaphi emacaleni ahlukahlukene, eqinisweni kungaba umgomo oyisidingo esijezisweni samacala afana nokutapa impahla noma ukulimaza impahla.
Kodwa, lolu hlobo lwesigwebo alutholakali emacaleni abucayi owonile angathola kuwo isijeziso sokubulawa noma sokugqunywa ejele.
Isidingo esinqala sesigwebo sokwenza umsebenzi womphakathi ukuthi kuhlomule umphakathi. Ngakho umehluleli angayalela isikhulu sebhange esikhwabanise imali yebhange ukuba sivolontiye enhlanganweni yomphakathi futhi sinikele imali kuleyo nhlangano.
Umehluleli angaqoka lesi sigwebo njengesithatha indawo yesigwebo sejele. Lesi sigwebo sihlomulisa umphakathi ngezindlela ezimbili:
sisebenza njengesivimbelo kwabanye abangase benze amacala,
siwuphawu olubonakalayo lokunxeshezelwa ngokuhlukumezeka okudalwe owenze icala.
Nakuba ziningi izindlela zesigwebo sokusebenzela umphakathi ezingawuhlomulisa kepha kufanele zixhumane ngqo necala elenziwe. Isibonelo, izinkantolo sezike zazichitha izigwebo zokwenza umsebenzi womphakathi ezifaka izinhlangano zomphakathi ezingahlangene nowenze icala noma icala uqobo lwalo.
Isibonelo, isikhulu senkampani esingenawo umlando wokusebenzisa izidakamizwa kabi sigwetshwe ngenxa yokusebenzisa budlabha imali yenkampani ukuzihlomulisa, umehluleli asiyalele ukuba sinxephezele isikhungo somphakathi esibhekela abadla izidakamizwa. Uma olahlwe yicala ephonsela lesi sigwebo inselelo, makhulu amathuba okuthi iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ilichithe leli cala ngenxa yokuthi lesi sikhungo sabadla izidakamizwa asinakho ukuxhumana nogwetshiwe noma icala uqobo.
Izinhlelo zabadla izidakamizwa
Ezimweni eziningi, abehluleli baye bathi umphakathi uzohlomula uma odla izidakamizwa engena esikhungweni sokuhlumelelisa.
Umphakathi uzohlomula ngoba umehluleli ukholwa ukuthi mancane amathuba okuthi ogwetshiwe aqhubeke enze amacala uma ethola ukwelashwa okufanele.
Ukungena kukamgwetshwa ohlelweni lokwelashwa kujwayele ukungeneli, kuzimele kukodwa, ukuhlangabezana nokuhlolwa ukuthi kuyawuhlomulisa yini umphakathi.
Abanye abehluleli bangafuna ukuthi osegwetshiwe enze umsebenzi ongaphezulu kohlelo okufana nalokhu:
ukuxhasa ngemali noma ukweluleka abanye abadla izidakamizwa
Kunemibandela eminingi ukuphatha isibhamu kuleli
ukuhola imihlangano yokwelapha noma izinhlelo esikhungweni
ukuhlela imihlangano yokwelapha
Amalungelo kalowo osegwetshiwe
Nakuba benelungelo lokukhipha izigwebo, kepha abehluleli abakwazi ukukhipha isigwebo sokusebenzela umphakathi esigxambukela emalungelweni kalowo ogwetshiwe, okufaka phakathi ithuba lokuthola umsebenzi okhokhelayo nokugcina inhlalo enhle ekhaya.
Isibonelo sezinqumo izinkantolo ezithole ukuthi azilungile:
ukudliwa kwempahla yolahlwe icala efaka umuzi, ukwengeza emsebenzini wesihle weminyaka emithathu owenziwa ngenzandla uma ogwetshiwe engeke akwazi ukuwenza ngenxa yeminyaka yobudala
ukudingiswa komgwetshwa ekhaya lakhe nasemphakathini lapho icala lingafaki ucansi.
Isikhathi sokwenza umsebenzi womphakathi esikhishwa umehluleli akumele sibe ngaphezulu kwesigwebo secala. Isibonelo, uma umthetho uthi isigwebo sokukhwabanisa imali yiminyaka eli-10 ejele, umehluleli akwakwazi ukunquma ukuthi owonile agwetshwe iminyaka eyisi-7 ejele nemihlanu enza umsebenzi womphakathi ngenxa yokuthi lesi sigwebo sesingaphezulu kweminyaka yesijeziso ebekiwe okuyiminyaka eli-10.
Uma ubekwe icala noma ugwetshwelwe icala ungenaso isiqiniseko sokuthi ungajeziswa ngokuthi wenze umsebenzi womphakathi, xhumana nommeli onamava okunguye ongakwazi ukukweluleka ngezindlela zokuvikela amalungelo akho.